UGQIRHA NGUBANI | NGUBANI IGAMA LOKWENENE LIKAGQIRHA? -RADIO TIMES - INZULULWAZI
Ugqirha Ngubani? Ngubani igama lokwenene likaGqirha?
Yintoni igama? Kuninzi kakhulu, ukuba unguGqirha, okanye iBasil, okanye iTheta Sigma, okanye i-²x², okanye nantoni na enguGqirha okhokelayo ngokwenene kubizwe.
Ngokuqinisekileyo ayisiyiBasil, ukuba sinyanisekile. Kodwa lelo ligama alinika ngo-2017's I-Zygon Inversion, kwaye uGqirha akaze axoke, akunjalo? Ngaphandle kwaxa uGqirha exoka, elixesha lonke.
Kodwa ukuba ayinguBasil, okanye 'uGqirha Ngubani,' emva koko?
Ngubani igama lokwenene likaGqirha?
Eyona nto icacileyo kukuba uGqirha akafuni ukuba sazi, eneneni. Ukuqala kwakhe ukudibana noMlambo iNgoma, uGqirha weshumi kaDavid Tennant wothuka kwaye wothuka kukuba uyalazi igama lakhe, esithi sinye kuphela isizathu sokuba abhengeza olo lwazi. (Siyakrokrela ukuba eso sizathu yayikukutshata, kuba kwakusemtshatweni wabo, ngoku ekwishumi elinanye lomzimba, ekuthiwa wamhleba endlebeni yakhe - kwelinye icala, ngewayesithi Ungakhathazeki, ndingu eneneni yinguqulelo yerobhothi yam enezinto ezincinci endizifihle ngaphakathi. Ixesha leNkosi imitshato inzima).
Ngexesha elifanayo, igqwirha (uxolo, uCarrionite) uLilith wathi ugqirha wayefihla igama lakhe lokwenyani kuye ephelelwe lithemba, ngelixa intombazana yaseRoma u-Evelina esithi igama lakhe lokwenyani lifihliwe nakuye. Inomdla.
Ngexesha lokuzalwa kwakhe okulandelayo, ukugcina igama lakhe ngaphandle kwezihloko yayingumsebenzi osisigxina: ngokwe-Dorium Maldovar, iqhina elithi 'Gqirha. I-WHO? ’Yayingumbuzo ongamele uphendulwa. Ubukrelekrele obuKhulu babunqwenela ukufumana ulwazi kulwazi (ngokungathi into engenanto inokufumana nantoni na), ngelixa kwelinye icala, Ukuthula kwakuyinkolo yonke / iklabhu ye-monster esisiseko yokumisa uGqirha. nanini na uyithetha.
Kwimizuzu elishumi elinanye yokufa, safunda ukuba elona gama likaGqirha yayingumqondiso okhethwe ziiNkosi zeXesha lokuba zibuyele kwindalo iphela-ukukhaba i-bunfight enkulu kule nkqubo-de uClara wabacenga ukuba lelona gama libaluleke kakhulu ' Ugqirha '.
UClara ngokwakhe wafunda ngokufutshane igama lokwenyani likaGqirha encwadini, Imbali yeXesha leMfazwe (ayifumaneki nakweyiphi na iivenkile ezithengisa ezitratweni ezilungileyo, ngelishwa) kodwa ishishini elithile elinamaxesha amshiye engenankumbulo ngalo. Ewe!
Ngoku, kulandela iziganeko zaBantwana abaNgaphelelwa nguGqirha kaJodie Whittaker, asinakuqiniseka ukuba kwaGqirha uyalazi igama lakhe lokwenyani… ingaba oku kuba nayiphi na into edidayo?
Ngapha koko, ngokungabi nantlonelo ngokupheleleyo kwiminqweno yeqhawe lethu- kunye nokukhuseleka okunokwenzeka kwindalo iphela - masiqwalasele ezinye ithiyori zento ugqirha unamandla ukubizwa…
Igama likaGqirha ngu… Gqirha
Okokuqala, kufuneka sibuze ukuba ngaba uGqirha inokuba ligama lokwenene likaGqirha. Ngubani owaziyo, kunokuba yinto eqhelekileyo njengoSteve okanye uKevin kuGallifrey?
Kodwa ubungqina buya kuphakamisa. Kwigama likaGqirha, ixesha likaMat Smith u-Lord uxelele uClara ukuba ukhethe igama elithi 'Gqirha' njengesithembiso- isithembiso sokungaze ukhohlakele okanye ube ligwala; Ungaze unikezele, kwaye ungaze unikezele. Ngokudumileyo, wala ukusebenzisa isihloko ngexesha leMfazwe yeXesha, evakalelwa kukuba isenzo sakhe asizalisekisi isithembiso.
IValeyard - uhlobo lweHyde kuJekyll kaGqirha, ekhutshwe kwicala elimnyama lobuntu bakhe - ikwachaze ukuba igama liyi-alias, ngelixa u-John Simm's Master wayemgculela ngokuzenza isitayile njengendoda eyenza abantu babengcono.
Njengesiqhelo, nangona kunjalo, inkosi iyifumene ngokungalunganga njengoko, ngokweNgoma yoMlambo, okwahlukileyo kuyinyani: thina fumana igama elithi Gqirha yena : igama lokuphilisa kunye nesilumko kwindalo iphela, ngokusekwe kwiintsomi zoGqirha. (Uluvo, njengoko iRadioTimes.com ixele, ukuba uSteven Moffat waqala ukucebisa nge-idroom kwi-intanethi kwiminyaka engama-20 eyadlulayo.)
Ngelishwa, ugqirha ubonakala ngathi unee-doctorate ezininzi, kubandakanya, ngokwe-2011's The God Complex, enye yokwenza ushizi. Kodwa inokuba yayiyintlekisa.
Igama likaGqirha ngu… John Smith
Amagama aqhelekileyo oGqirha (ngaphandle kukaGqirha, ngokucacileyo), eli ligama lakhe elisezantsi eMhlabeni. Ugqirha kaJon Pertwee wayisebenzisa ngalo lonke ixesha ngelixa exinekile apha kwi-70s (okanye yayiyiminyaka yama-80s?) Kwaye usayinyikimisa nanamhlanje, kubandakanya xa uGqirha weshumi elinambini enze 'isiciko esinzulu' njengomgcini weSikolo seCoal Hill. Naye yaba UJohn Smith, uyinyani, xa wajika umntu wazimela kuLusapho lweGazi. Owu, kwaye ibhaliwe kwikhadi lakhe lethala leencwadi, ekunokwenzeka ukuba, ngokungathi akukho semthethweni ngokupheleleyo, akunjalo?
Igama likaGqirha ngu… Theta Sigma
U-Theta Sigma - okanye u-flash, ukuba uziva unombane-yayisisiteketiso esanikwa uGqirha kwi-Time Lord Academy eGallifrey, ngokuka Drax, umfundi owayephila kwiklasi ye-'92 owathi ugqirha wesine waphinda wangena ngexesha Isizathu seArmagedon.
Kubonakala ukuba oku kunokuba ngumzamo wokwenene ngumbhali u-Anthony Read, owadala iDrax, ukuphendula uthotho 'lombuzo oyindumasi ngesihloko sendlela ethile yabanqolobi abalahlayo. Ngethamsanqa, wonke umntu ukhethe ukungakuhoyi oku kwaye acinge ukuba ibisisidlaliso esihlekisayo, esiye saqinisekiswa ngugqirha weSixhenxe ukuba sikulo Patrol yolonwabo.
Ngaba inokunika umkhondo ngegama lakhe lokwenyani, nangona kunjalo? Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwegama lesidlaliso lithwala ubudlelwane bokwenyani (ngaphandle kokuba uyiSting).
Ukuze sifumane umkhondo, masityhile kuThe Making of Doctor Who, isalathiso sokuqala sesalathiso sokuqala, esapapashwa ngo-1972. Ibhalwe ngumhleli wesikripthi ngelo xesha uTerrance Dicks kunye nesikripthi esiqhelekileyo uMalcolm Hulke (ngaloo ndlela usinika ilungelo elithile) , oqhelekileyo njengoko uthanda, ukuba igama lokwenyani likaGqirha yayingu-δ³Σx². Ke iTheta Sigma isenokuba luluhlu olwahlukileyo lolu. (Andinakukuxelela, njengoko konke oko kusisiGrike kum.)
Igama likaGqirha ngu… Isivunguvungu Esizayo, Irhamncwa, Umrhwebi weeDaleks, uMtshabalalisi oMkhulu, uMtshabalalisi weHlabathi, njl.
Amagama anikwa ugqirha ziintshaba zakhe ezahlukeneyo. Amagama amahle, ewe. Ukuba bafuna ukumcaphukisa, kufuneka bambize ngobuso beCustard, okanye enye into.
Igama likaGqirha ngu… Into engachazekiyo
Ugqirha wesithandathu wakha waxelela uPeri ukuba ngekhe akwazi ukubiza igama lakhe lokwenyani. Nangona oku kwakukwiRadiyo 4, ke akunakuba yi-canon. Kwakhona, uGqirha wesithandathu wayenoluvo oluphantsi kakhulu lwabantu, kwaye amaMelika ngokukodwa, ngenxa yoko wayenokuba krwada.
Nangona kamva, Ugqirha weshumi elinesibini kaPeter Capaldi wacebisa kwimizuzu yakhe yokugqibela ukuba igama lakhe lalingaqondakali, ngaphandle kokuba ungumntwana onentliziyo yakho kwindawo elungileyo ngubani owaziyo- mhlawumbi yayingeyiyo idosi esempilweni yokungabathiyi abantu abavela kwesithandathu Ugqirha emva kwako konke…
Igama likaGqirha ngu… Gqirha Ngubani
Kulungile, nantsi enkulu. Ukuba igama lokwenene likaGqirha nanini unayo sithethwe kwiscreen, ubuninzi bobungqina bukhomba kwigama lakhe ngokufanayo nakwitena (okanye kwibhokisi yeDVD, kunjalo): Ugqirha Ngubani.
Okokuqala, kude kwangowe-1966, kwibali likaWilliam Hartnell I-War Machines, i-supercomputer yeWotan yabhengeza uGqirha Ngubani ofunekayo, mziseni apha.
Ewe, siyazi esona sizathu soku kungenxa yokuba umbhali wayengakhange afunde isishwankathelo sakhe ngokufanelekileyo, okanye wayengakhange abukele umboniso, kodwa ngoku uphandle, asinakuwuva.
I-Wotan inokuba iphosakele, kunjalo-imeko yekhompyuter ithi Ngubani-kodwa bekukude nesiganeko esizimeleyo. Kunyaka olandelayo, uGqirha kaPatrick Troughton, ezenza umJamani, wasebenzisa igama elithi 'Doctor von Wer' (Doctor of Who), kwaye kwiiveki ezimbalwa kamva watyikitya umyalezo noGqirha W. lonto mhlawumbi kuthetha?
Oko kukuthi akukho nto kuyo yonke iGqirha? Gqirha ngubani? gags ngaphezulu kweminyaka. Kwaye masingakulibali isicatshulwa esipheleleyo sesilumkiso sikaDorium Maldovar: Umbuzo wokuqala. Umbuzo ongamele uphendulwe, ufihlwe emehlweni acacileyo. Umbuzo obusoloko ukuwo ebomini bakho bonke. Gqirha ngubani? Gqirha ngubani? Gqirha ngubani?
Ifihliwe kwimbonakalo ecacileyo . Yintoni enokuthi ifihlwe ngakumbi kunelo gama lomboniso, leyo iza kuwe ngapha nangapha kwisithuba ekuqaleni kwesiqendu ngasinye? Iyabonakala kakuhle, xa ucinga ngayo.
UMissy kaMichelle Gomez ngokuqinisekileyo wayefuna ukuba sikholelwe ukuba yimpendulo leyo, ezibiza ngokuba nguGqirha Ngubani xa wayengena ezihlangwini zikaGqirha ukuya kulolonga uqeqesho kwi-2017's World Enough and Time, kwaye egxininisa emva koko ukuba ngenene ngu igama lakhe.
Uyikhethile ngokwakhe, ezama ukuba izwakala ingaqondakali, utshilo. Emva koko wayilahla 'Ngubani' xa eqonda ukuba incinci impumlo.
NoGqirha akavumi. Uyabona lomfazi uphambeneyo uhleli kwesisitulo? Igama lakhe ayinguGqirha Ngubani, igama lam nguGqirha Ngubani.
Akunjalo? Ubuza uNardole edidekile.
Ndiyayithanda, uphendula uGqirha.
Yiza ukucinga ngako, nathi ke. Kwaye ngakumbi inikezwe izityhilelo ze2020's Abaphelelwa lixesha abantwana, eyacebisa nokuba uGqirha akayazi inyani yexesha lakhe elidlulileyo, mhlawumbi kufanelekile ukuba sinamathele kuyo. USteven Moffat ubonakala eyithanda le nto…
Eli nqaku lalipapashwe ngaphambili kwi-2017
Ugqirha obuyela kwi-BBC enye ngasekupheleni kuka-2020 / ekuqaleni kuka-2021
iArsenal vs Aston Villa Umsinga
kuya kubakho inzala 4
molly mae love imvelaphi yesiqithi
indlela yokukhulisa ipayinapile ukusuka phezulu
iimpahla ezifashisayo zabasetyhini abangaphezu kweminyaka engama-50